KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Maqaallo
Somaalida waxaa lagu xantaa in ay tahay bulsho hadal badan isla markaana waxa walba oo ay aragto si un wax uga sheegto.
Todobaadkii hore Magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday Dagaal u dhaxeeya dhinacyada isugu awood sheeganaya gacan ku heynta Magaalada, waxaana dagaalkaasi markii ugu horeysay aaga hore ee dagaalka lagu arkay Shariif Shiikh Axmed oo ah Madaxweynaha hada talada haya, waxaana badanka dadka reer Muqdisho markii dhawaqaasi dhagahooda uu gaaray ay xasuusteen waayadii Maxakamadaha iyo sanadkii 2006-dii siday xaaladu aheyd.
Soomaaliya waxaa loo tiriyaa in mudo nus qarni ah ay xor aheyd isla markaana ay ka madax banaaneed gumeysi, waxaana gugii 50-aad uu u buuxsamay bishan.
Tan iyo xiligaa Dalka waxaa isaga danbeeyay maamulo magacya kale duwan leh, waxaa la soo maray 9- sano oo xukuumad rayid, 21 Sano oo xukun milatari ah iyo ku dhawaad 20 sano oo looma dhama ah.
Ma Gole Shacab baa mise Gole laaluush ?!!!
Yaabaye ma yaabteen!!, Soomaalida oo ah bulsho afku maalnimo alle ku maneestay isla markaana wax walba oo ay tuhmaan ku cabiro Murti, Maahmaah, Xikmad iyo Suugaan ayaa waxa ay tiraahdaa “Oohinta orgiga ka weyn” oraahdan waxa ay adeegsadaan Soomaalida marka ay arkaan arin is qaban la’.